“Kufsiga Puntland ka socdaa waa mashruuc “, Waxaa qortay Xildhibaan Nimco Cabdi Caarshe. – Radio Daljir
“Kufsiga Puntland ka socdaa waa mashruuc “, Waxaa qortay Xildhibaan Nimco Cabdi Caarshe.
Abriil 12, 2019 12:32 g 0
Kufsiga Puntland ka socda Waa Mashruuc amniga iyo xukuumadda puntland lagu khalkhalinayo, dumarkana lagu cabsi galinayo.
waxay arintaani bilaabantay Jan 2019 inkastoo kufsigu jiray, hadana horay uma jirin kufsi dil wata, waxay noqotay tusbax furtay, Kufsigu waa caado xun oo bulshada lagu kala dilayo lagu xumaynayo mustaqbalka gabadhaha Puntland maaha arin laga aamusi karo waxay rabtaa in si hoose loo eego arintaan kufsi iyo dil waa arin laga argagaxo saqiir aan aan qaan gaarin ayaa hore loo kufsaday si xunna loo dilay maantana waxay maraysaa hooyo xaamilo ah. waana wax laga xumaado waxaan usoo jeeddinaya xukuumada Puntland in ay arintaan si dag daga wax uga qabtaan, arintaan yaan dhaqan iyo odayaal wada hadla lagu halayn lagana sugin xalkeeda cadaaladu ha shaqayso oo si dhab ah wax halooga qabto. Maaha arin laga aamusi karo maaha arin la eegan karo , maaha arin la sugi karo waa arin rabta dhaqso in wax looga qabto.
Waxan ku celcelinayaa meeday xukuumadii aan dooranay maxaa helay waa maxay arintii caasho ayaa weli jiitamaysa maxaa dhacay oo cadaalada loo horgayn waayey maxay tahay dabashabeelintu , waxaan leenahay aan.aragno ragii caasho kufsiga iyo dilka isugu daray iyadoo la xukumay oo weliba xukunka fulin loogu daro . Markaas ayaa laga nasanayaa arintaan.
Maaha arin la dhayal san karo waa amnigii dalkoo la halaynayo , waa mustaqbalkii dalkoo xumaanaya , waa haweenkii oo niyadii ka xumaaatay wa inaan u kacno oon wax ka qabano.
Waxaan sugaynaa xukunka caasho kuwii siqiir suujiyey iyo xaamiladii lagu xadgudbay cod dheer waxaan ku leenahay hadaan nahay haweenka puntland aan aragno daaliminta oo xukunkii lagu fuliyey”.
Maqaalo Kale 242 Wararka 16952
Shacabka Suudan oo sheegay inay si wadayaan dibadbaxyada (Daawo)
Warkii Duhurnimo iyo Xuseen Madar , Daljir Bossaso (dhegayso)